ARA-DALÀNA NY ASA
NY ASA ARA-DALÀNA
Na izany aza, fahafahana bebe kokoa misokatra ho an’ireo izay, raha ny fivoriana ara-barotra tanjona miantoka ny fanarahan-dalàna amin’ny mpanao lalàna ireo fepetra takiana. Ny mpahay lalàna dia hanampy anao mba hahatakatra ny hery anaty ny raharaham-barotra, amin’ny fomba mahomby ny fitantanana vao misondrotra ny loza mety hitranga.
Rehefa mifantoka amin’ny zavatra ilain’ny mpanjifa, dia foana ny miezaka mba hanompo ny tombontsoa. Dia halalino tsara ny zavatra ilaina, handinika ny zava-misy sy ny tolotra-mahay sy ny vahaolana azo ampiharina fa hihaona ny mpandraharaha filàna.
Ny iray amin’ireo lehibe indrindra ny lalàna ny fomba fanao.
Ny mpahay lalàna miara-miasa amin-panjakana sy ny manam-pahaizana manokana ao amin’ny hetra, ny raharaham-barotra sy ny mpanolo-tsaina ny tolotra, izay mamela antsika mba hamahana ny olana soa aman-tsara, ny fampiasana amin’ny fomba samihafa.
Ny sampana mombamomba azy.
Mba ho azo antoka ny avo ny kalitaon’ny tolotra dia manana ny fahalalana ilaina momba ny tsena izay miasa noho ny mpanjifa.
Isika hahatakatra ny tanjona sy ny zava-tsarotra eo anoloantsika
Izany zavatra niainako izany dia mamaritra ny sehatrasa fomba fanompoana delivery
Manimba Wex ara-Dalàna ny Rakibolana Rakipahalalana LII-Dalàna Vaovao Institute